Etu esi eme nchọpụta Arrowino | Akụrụngwa n'efu
Ga n'ihu na atụmatụ ndị ahụ iji mepụta ọrụ nke gị, oge a ka m chọrọ igosi gị otu mepụta onye na-achọpụta ụgha na-atọ ụtọ Na nke ị ga-ahapụ ndị ọbịa gị niile ka ọnụ ha meghee ekele maka ezigbo ọrụ ya. Dị ka aha nke post a na-ekwu, n'oge a, anyị ga-eji bọọdụ Arduino dị mfe nke ga-abụ onye nchịkwa maka ọrụ ahụ dum.
N'ime oru a, na mgbakwunye n'ịmụta otu ụdị ndị nchọpụta a si arụ ọrụ nke ọma, ihe na-adọrọ mmasị, ga-enyere anyị aka ịmata otu aru anyi si aru oru na nzaghachi di iche iche o puru inye dabere na ọnọdụ ị hụrụ onwe gị na ya ma ọ bụ, n'aka nke ọzọ, mmetụta uche ị na-ata ahụhụ dabere na ajụjụ ha nwere ike ịjụ gị.
1 Otu onye na-enyocha ụgha si arụ ọrụ
1.1 Ndepụta nke akụkụ anyị ga - achọ iji wuo onye na - achọpụta ụgha anyị
1.1.1 Ihe ndị dị mkpa eletrọniki
1.1.2 Ihe ndị dị mkpa
1.1.3 Ngwaọrụ dị mkpa
1.2 Anyị malitere ịkpụzi onye na-achọpụta ụgha anyị site na ịgbanye ọrụ ahụ dum
1.3 Ugbu a bụ oge iji zụlite ma wụnye ngwanrọ niile na onye na-achọpụta ụgha anyị
1.4 Anyị na-eme mkpachị ga-aga na mkpịsị aka nke isiokwu ka a nwalee ya
1.5 Emepụta igbe iji chekwaa akụrụngwa anyị niile
Otu onye na-enyocha ụgha si arụ ọrụ
Ọbụna tupu ịmalite iwu nchọpụta ụgha gị, ọ ga-akacha mma ịghọta etu o si arụ ọrụ. N'ihi nke a, ọ ga-adịrị gị mfe karị ịghọta ihe kpatara ejiri ngwaike jikọọ n'ụzọ ụfọdụ na ọkachasị ihe kpatara edobere koodu nke na-eme ka ihe niile rụọ ọrụ nke ọma n'ụzọ ahụ. Mgbe ahụ akụkụ ahụ nke nhazi ga-abịarute na ị ga-achọ ịnwale imeghari ma hazie oru ngo a dika ihe nile ichoro.
Echiche nke oru a dabere na ya bụ inye ụzọ iji nweta tụọ ihe dị iche na ọnọdụ onye ọ bụla. Otu ihe di iche na ndi nchoputa ugha na nke ha dabere na mbu bu na akpụkpọ agbanwe conductivity na-adabere n'ọtụtụ steeti kedu ka ọ ga-esi bụrụ ọnọdụ anyị nwere n'oge ụfọdụ.
A na - akpọ ihe dị iche na nrụrụ nke anụahụ anyị mee ọrụ Electrodermal. (Enwere ọtụtụ ozi gbasara ya na ịntanetị). N'ihi akụ a nke anụ ahụ anyị ga-anwale, site n'enyemaka nke Arduino na sọftụwia akọwapụtara, iji hụ mgbanwe ndị a niile na-eme na nrụpụta nke akpụkpọ ahụ dabere na ọnọdụ anyị site na iji eserese.
Iji malite ịrụ ọrụ na onye nchọpụta ụgha anyị pụrụ iche, dịka anyị na-ahụkarị na ule dị iche iche, anyị nwere ike ịmalite site na ịnọdụ ọdụ isiokwu ọ bụla n'ihu akụrụngwa anyị, jikọta ihe mmetụta na ịza ajụjụ dị mfe dịka 'dika esi akpo ya?'ma ọ bụ'ebe i bi?'. Ajụjụ ndị a Ha ga - abụ ihe ndabere iji mara ọnọdụ uche nke isiokwu anyị chọrọ ịjụ. Mgbe e mesịrị, anyị nwere ike ịjụ ajụjụ dị iche iche iji chọpụta ma ọ bụrụ na ha na-agha ụgha ma ọ bụ na ọ bụghị n'ihi na ha nwere ike ịtụ ụjọ, nke ga-emepụta mgbanwe na ntọala.
Ndepụta nke akụkụ anyị ga - achọ iji wuo onye na - achọpụta ụgha anyị
Iji mezuo ọrụ a niile, anyị ga - eji microcontroller chọpụta ọdịiche dị iche iche wee zipụ data na kọmputa. Na ntughari, maka kọmputa anyị iji nweta data sitere na microcontroller a, ọ ga-onwem na a Oghere Usoro nkwanye mgbawa nke na - eduga anyị na nkwubi okwu na, dịka ọmụmaatụ, Arduino Mini ma ọ bụ Adafruit na ụdị ha dị ọnụ ala karịa. Isi okwu a dị oke mkpa iji rụọ ọrụ a, yabụ ọ bụrụ na karịa Arduino Nano dị ka anyị ga-eji, anyị nwere ụdị microcontroller ọzọ n'ụlọ, anyị nwere ike iji ya ogologo oge ọ nwere mgbawa nkwukọrịta agbakwunye.
Ihe ndị dị mkpa eletrọniki
10 kOhm iguzogide
Ngwaọrụ dị mkpa
Anyị malitere ịkpụzi onye na-achọpụta ụgha anyị site na ịgbanye ọrụ ahụ dum
Dị ka ị pụrụ ịhụ n’ihe onyonyo dị n’elu ahịrị ndị a, wiring niile oru ngo dị mfe karịa ka ị pụrụ iche n'echiche ebe ọ bụ na ihu ọma na ị ga-arụ isii mfe nzọụkwụ:
Jikọọ eriri, jiri mmesapụ aka ya n'ogologo, tinye na ntinye analog nke Arduino
Jikọọ resistor na Ground na waya nke anyị jikọtara na ntinye nke ana-akpọ Arduino
Jikọọ a pụtara ogologo waya na Arduino si 5 volt pin
Jikọọ anode (ụkwụ ogologo nke ndu) nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dugara pin pin 2 na cathode (ụkwụ dị mkpirikpi) n'ala
Jikọọ anode nke oroma dugara pin 3 na cathode na ala
Jikọọ anode nke uhie na-eduga na pin 4 na cathode na ala.
Nke a bụ wiwi niile ị ga - eji jikọọ. Na ụkpụrụ, o zuru oke ịnweta ya dị ka nke a ma dị n'elu ụfọdụ ka ihe ọ bụla ghara ịgagharị. Anyị nwere ike ikpuchi ihe a niile ma nye ya nlele mara mma karị.
Ugbu a bụ oge iji zụlite ma wụnye ngwanrọ niile na onye na-achọpụta ụgha anyị
Tupu ịmalite ịmalite ịzụlite ihe ọ bụla, anyị ga-edo anya na, ma ịhazi ma chịkọta ọrụ niile anyị ga-eji ụdị Arduino IDE kachasị ọhụrụ. Anyị ga-eji nsụgharị a mee ihe ebe ọ bụ na n'ime mbipụta ndị ọhụrụ, enwere ihe nlekota anya nke na-enye anyị ohere ịhụ data natara n'ụzọ ọhụụ site na eserese na oge kama iji nyocha usoro, ebe ozi a pụtara na usoro ederede.
Iji na-agba ọsọ a ileba anya na anyị ga-emeghe Arduino IDE, gaa na ngwaọrụ menu na ọ ga-emi odude dị n'okpuru serial ileba anya.. Ozugbo anyi mechara ihe a niile, ị ga - ebudata faịlụ m ga - ahapụrụ gị n'okpuru usoro ndị a, mepee ya ma bulite ya na bọọdụ gị.
Anyị na-eme mkpachị ga-aga na mkpịsị aka nke isiokwu ka a nwalee ya
Ozugbo anyị nwere oru ngo fọrọ nke nta zuru, ọ bụ oge na-aga nzọụkwụ ọzọ na mepụta obere vidiyo nke ga-ahụ maka ịchọpụta nrụrụ anụ ahụ anyị na-eweta n’oge a kapịrị ọnụ.
Dịka ị pụrụ ịhụ n'ihe onyonyo a gbasasịrị n'otu ọkwa a, echiche ahụ gafere rapara na mpempe akwukwo aluminom na ala nke velcro. A gha eme nke a na mpempe abụọ nke velcro nke anyị ga-eji.
Ozugbo anyị nwere ibe dị njikere, dịka ị ga - ahụ n’onyonyo dị n’elu akara ndị a, ọ bụ oge jikọọ na aluminum foil na USB na anyị jikọọ na analọg pin nke Arduino. Anyi aghaghi ime usoro a, n'otu uzo, ya na mpempe ozo nke velcro na eriri nke anyi jikotara na Arduino ugbua pin, na pin 5 volt. Gbaa mbọ hụ na njikọ gị siri ike na ọ gaghị apụkwupu naanị site na ịgagharị velcro ntakịrị.
Emepụta igbe iji chekwaa akụrụngwa anyị niile
Na nke a anyị ga-nzọ na -eme a ụdị igbe na-echekwa niile mmiri nke anyị ụgha detector na a nnọọ rudimentary ma ezi irè ụzọ. Ebumnuche bụ ịmepụta obere ogige iji chekwaa mgbaaka velcro. Nke a, n’aka nke ya, kwesịrị ịnwe obere oghere atọ ka e wee nwee ike ịhụ ndị LED.
Dị ka ị na-eche n'echiche, ihe anyị ga-eji mee ụdị igbe a bụ kaadiboodu nke dị na ndepụta nke ihe ndị dị mkpa. Site na kaadiboodu anyi nwere, anyi ga-ebipu rectangle abuo nke 15 x 3 centimita, rektangulu 15 x 5 centimita, rektangulu ato nke 4 x 3 centimeters, a rektangulu nke 9 x 5 centimeters na a rektangulu nke 6 x 5 centimita.
Ozugbo ebipụchara akụkụ anọ niile, anyị ga-ewere 15 x 5 cm nke ga-abụ isi. A ga-ejikọ rectangles abụọ 15 x 3 na abụọ 5 x 3 n'akụkụ nke isi. Ugbu a ọ bụ oge iji kpoo ihe ntanetị nke 5 x 3 nke atọ na isi ya na 6 centimeters site n'akụkụ.
N'ebe a ị kwesịrị inwe rektangulu nke kewara abụọ, otu nwere ogologo nke 6 centimeters na nke ọzọ n'ogologo 9 centimeters.. Akụkụ nwere ogologo 6 centimeters bụ ebe anyị ga-edebe eletrọniki, n'akụkụ nke ọzọ, ọ bụ ebe mkpịsị aka ga-adị.
N'oge a, naanị anyị ga-ebipụ oghere 3, nha nke LEDs, na rectangle 6 x 5 cm, gluing ha n'akụkụ 6 cm. A ga-ahapụ ya ka ọ rapara, na teepu nrapado, akụkụ dị mkpirikpi nke rektangulu 9 x 5 cm n'akụkụ dịkarịsịrị nso na 9 cm. Nzọụkwụ ikpeazụ a ga - abụ ụdị mkpuchi nke ga - agagharị na ala ịchekwa ma kpughee mkpịsị aka mkpịsị aka..
Ozugbo anyị wụnyechara ihe niile dị n'ime igbe ahụ, ọ bụrụ na ihe niile emeela nke ọma, anyị ga-enwerịrị obere onye na-achọpụta ụgha n'ihu anyị. Dị ka ị nwere ike iche, ọ bụ ezie na ọrụ ya dị mfe, eziokwu bụ na ọ bụghị oke nkenke kemgbe ọtụtụ ndị ọkachamara na-agha ụgha nwere ọtụtụ ihe mmetụta, dị ka ihe nyocha nke obi, iji chọpụta nke ọma ma ọ bụrụ na isiokwu na-agha ụgha ma ọ bụ na ọ bụghị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Arduino » Otu esi eji Arduino mee ihe nchoputa ugha